Dia nitomany mafy izy (Gen 45 :2)
Fa iza no nitomany mafy, fa naninona, inona no antony. Izany no fanontaniana mipetraka voalohany indrindra, raha mandre izany fehezan-teny fohy izany. Ndeha ary isika hiezaka hamaly izany fanontaniana izany ary hanazava ny antony, ary ny lesona azo tsoahina amin’izany.
Nisy kiakiaka sy toreo mafy tao amin’ny tanàna nisy ny Praiministr’I Egypta. Nandeha ny feo, fa misy inona, fa ny Praiministra mihitsy hono no mikiakiaka mitomany ao. Nandeha daholo ny tombatombana, marary ve, nisy maty ve, sa manana olana manokana…? Raha zazakely ny mitomany, angamba tsy dia mahataitra ny olona rehetra, fa olon-dehibe, ary olona manana ny toerana ambony indrindra manaraka ny mpanjaka.
Rehefa nozohina ny antony, hay ny rahalahin’ny Praiministra no tonga, tonga vahiny. Ka tsy tokony ho faly ve, raha ny marina tokony ny amponga no midoboka, ary koràna no ho re, fa ahoana, sa ranomasom-pifaliana?
Tsy izany, fa hafa mihitsy ny zava-miseho. Ny rahalahin’I Josefa no tonga, rahalahiny izay namadika azy, ary nifofo ny ainy, nivarotra azy tamin’ny olo-tsy fantatra noho ny fialonana tsotra izao, raha ny marina, nanao azy ho fahavalo ary tsy nieritreritra ny maha-mpiray tam-po fa tena nandefona ivoho. Nihaona aminy ihany amin’ny ora tsy ampoizina.
Koa tsy sokina manatona afo ve, tonga tsy nokarohina, avy tsy nantsoina, ka tsy tonga ve ny fotoana tokony hamaliana azy ireo amin’izay, amin’ny ratsy izay nataony? Izy rahateo manana fahefàna amin’ny maha-mpitondra ambony azy? Na fara-faharatsiny mba nofaizina satria nanao ny tsy nety mba tsy hamerina intsony?
Ry Havana malala, tsy izany no nataon’I Josefa, ilay mpanompon’Andriamanitra natahotra an’Andriamanitra mandrakariva. Rehefa tonga ny fihaonana tamin’ireto azo lazaina fa fahavalo namarina an-kady, Josefa indray no nigogogo nitomany. Inona no hevitr’izany zavatra izany?
Hitantsika fa ny fiainan’I Josefa dia fiainam-pankatoavana. Tsy mba nandà na nanohitra na nampiasa hery izy, tamin’ny zavatra nanjo azy na dia tsy rariny aza. Nanomboka tamin’ny tsy fitiavan’ny rahalahiny azy tany an-tanindrazany izany, nitohy tamin’ny tsy rariny sy ny fiampangàna tsy marina tao an-tranon’I Potifara, ny fanaovana azy tany an-tranomaizina… Ny fiainany manokana nanmpiavaka azy dia ny fanekeny ny zavatra rehetra nisy fa avy amin’Andriamanitra. Na dia ny fahatongavany tany Egypta aza, araka ny filazany dia avy amin’Andriamanitra. Ianareo hoy izy, no nihevitra izao ho ratsy, fa Andriamanitra kosa nanana ny hevitra tsy takatry ny saina, tao ambadik’izany rehetra izany , ho tsara;
Josefa nitomany mafy! Mifono toetra miafina tsy takatry ny saina. Saintsaino tsara ry Havana, nanoloana ny zavatra nisy teto amin’ireto mpiray tam-po ireto, amin’izao fihaonana eo amin’izy ireo, iza no tokony hitomany sy handadilady, ny nanao ratsy sa ny tsy manan-tsiny? Dia mazava be ny valin-teny, fa izay nanao meloka, indrindra tonga manatrika ny manam-pahefàna, no tokony hilelam-paladia mihitsy. Ny mifanohitra amin’izany anefa no mitranga, Josefa indray no nitomany nigagam-bahoaka.
Ry Kristiana Havana, nanana toetra hafa nampiavaka azy Josefa, dia izay voalazanatsika tery aloha hoe fiainam-pankatoavana. Ankoatr’izany ihany koa, nanana fanetren-tena lalina ihany koa izy, ka nibaby mandrakariva ny heloky ny hafa, ary tsy nitaraina tamin’izany. Josefa nitomany mafy, endriky ny fitondràna ny fahadisoan’ny rahalahiny teo amin’ny tenany izany, tokony ho izy ireo no nitomany, saingy tsy navelan’I Josefa hanao izany izy ireo. Ny azy no nataony tonga aloha, ary nataony am-pahibemaso sy ren’ny olona rehetra izany porofon’ny fananany toetra mendrika sy ambony izany. Tsy hafa izany fitomanian’I Josefa izany, fa fitondràny sy fizakany ny zavatra tsy nety nataon’ny rahalahiny, ary endriky ny famelàna sahady ny helok’izy ireo. Ankoatr’izany, araka ny fomba fitenintsika Malagasy, dia ranomasom-pifaliana ihany koa.
Ry Havana malala, aiza ho aizan’izany ny toetrantsika kristiana? Manoloana ny mpiray tam-po, ny ray aman-dreny, ny Havana, ny manodidina, indrindra ireo nanao tsinontsinona antsika? Ary manao ahoana rehefa mba nahazo toerana ambony isika, na nambinin’Andriamanitra ka tafasondrotra ihany na dia nailikilika aza. Ary rehefa tafahaona amin’ilay olona nanao ratsy antsika amin’izao fotoana, manao ahoana? Alaovy sary an-tsaina ilay olona nampigadra anao tsy ahoan-tsy ahoana, ilay nanendrkendrika anao ary nandroaka anao tsy hiasa intsony, ilay nangalatra ny volanao, na ny vadinao…Hevero raha misy izany fihaonana izany, ilaozantsika mihodina ve, sa ahoana?
Ny mpanompon’ANDRIAMANITRA MARINA, ry Havana malala, dia izay tena vonona hiatrika foana ny zava-mitranga eo amin’ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra. Jereo tsara sy banjino ny sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny zava-misy iainantsika. Aza dia faly manome tsiny na iza na iza, indrindra ny ankohonana. Fa io ankohonantsika na ireo havantsika tsy tia antsika ireo, tian’Andriamanitra hovonjena, tahaka ny fianakavian’I Josefa ihany koa. Hay izany, raha mandalo zava-tsarotra ny mpanompon’Andriamanitra, hay misy tanjona tsara sy tonga lafatra tsy takatry ny saina ao ambadik’izany hamonjena azy sy ny ankohonany.
Inona ary ny vokatr’izany rehetra izany indrindra teo amin’I Josefa? Tora-kovitra ny rahalahiny nanoloana ny fihetsik’I Josefa, indrindra nanoloana ny ranomasony. Jereo tsara, ry zalahy izay mafy be sady mafy fo tsy nanana fo antra manoloana ny fanetren-tena sy ny famelan-keloka ary ny fitiavana, nipararetra nangovitra. Tsy sanatria tahotra an’I Josefa akory amin’ny maha-mpitondra ambony azy fa tahotra sy hovitra noho ny hatsaram-panahy sy ny Fanahin’Andriamanitra ao aminy.
Eny tompoko, misy vokany dia misy vokany tokoa ny fanetren-tenantsika sy fiaretana fahoriana. Jereo fa ny fahavalo mipararetra sy matahotra manoloana ny toetran’Andriamanitra. Koa tianao ho resy ve ny fahavalonao tsy hoe resy any amin’ny tribonaly an, fa ho resy eo an-tongotrao sy eo an-tongotr’Andriamanitra. Manana fo tahaka ny an’I Josefa mamelà heloka tanteraka ve isika, manoloana ny rahalahintsika rehetra? Tsy ny mpiray tam-po ihany io akory, fa ny rahalahintsika ao amin’ny Tompo niaaraka tamintsika nefa namadika antsika, iray Fiangonana tamintsika, niara-nianatra tamintsika, naira-niasa tamintsika…Raha tonga ny fotoana anankiray ka tsy maintsy hifanena na hihaona, inona re no zavatra hisy e? Isaky ny mihaona amin’ny olona voakasik’izany ary ianao, manomboka androany, dia tsarovy Josefa sy ny tomaniny, DIA MBA MANAOVA TOY IZA NY KOA. Ny fitomanianao dia HAMAFA NY HELOK’ILAY NANAO RATSY TAMINAO ary hahatonga azy handray ny famonjen’Andriamanitra. Fa raha sanatria manozona kosa isika, dia hanidy azy ireny mandakizay ao amin’ny tranomaizin’ny heloka sy ny fitsaràna izany. Fa izay vahantsika ety an-tany mantsy, hoy Jesosy, dia ho vahàna any an-danitra.
Ny toetran’I Josefa, dia tsy hafa fa tandidon’I Jesosy Kristy, izay nijaly satria nolavin’ny olona sy nataony tsinontsinona, nefa tamin’ny alalany ihany no nahazoan’izao tontolo izao famonjena. Jesosy no nanatanteraka ny famonjena fara-tampony ary nanambara am-pahibemaso famelan-keloka teo amin’ny hazo fijaliana: “Ray o mamelà ny helony fa tsy fantany izany hataony”.
Ny famelan-keloky ny Kristiana dia tsy haitraitra na fombafomba fa nianarany tamin’I Kristy ary toetra raiki-tapisaka ao aminy izany. Tsy ampianarina antsika akory izany, fa iainantsika miaraka amin’I Kristy ao anatintsika. Ny valin’izany kosa anefa dia famirapiratana sy voninahitra. Koa mandehàna ianao, dia mba manaova toa an’I Jesosy ihany ,koa, mamela heloka ny olona rehetra, ary aza adinoana ny mandrotsaka ny ranomasonao mialohan’izay nanao fahadisoana, fa ny ranomasonao hisolo masoandro mibaliaka rehefa avy eo, ary ho tretrika sy ho sambatra ianao. Ny fiafarantsika dia tsara lavitra mihoatra ny voalohany, ary hahita ny famonjen’Andriamanitra mahagaga an’ireo izay nanao ratsy tamintsika isika, ka hifaly amin’izany ianao satria NY RANOMASONAO NAHAVIDY FANAHIN’OLONA TSY HO VERY MANDRAKIZAY. Mahereza!